Tao anatin’ny volana maromaro nitsanganan’ny hetsika dia natahorana ny fandriampahalemana mety hisian’ny famonoana sy fikasihan-tanana, fampidirana am-ponja sy fandrahonana samihafa mianjady amin’ny mpikambana ao anatin’ny hetsika “Mitsangana ry Malagasy”, raha ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny atoko tao amin’ny pejy « facebook ». Sarotra ny fifampifehezana anaty vondrona goavana sy antoko samy manana ny firehan-kevitra politika, saingy niezaka hatrany ny APM nanaja ny fitsipika nitondrana ny hetsika, nisolotena ny madinika, nijoro ho aro fanina ary sahy miteny ireo zavatra tsy mety. Hatramin’izao anefa dia mahatsapa izy ireo fa sakanana amin’ny fomba rehetra ny hetsika izay nokasaina natao sy mbola hatao. Resy ny demokrasia, ary resy ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra fa fitondram-panjakana “Adala Matanjaka” no misy eto, raha ny fahitan’izy ireo azy. Rehefa mangataka alalana ny MRM dia tsy nomena ary nopotehina hatramin’ny fitaovana. Rehefa tsy mangataka alalana ny MRM dia rahonana, ka amin’ny maha olombelona ny mpikambana dia milaza ny tsy hamono tena izy fa atody miady amam-bato ary nametraka ny fialan-tsininy amin’ny mpikambana rehetra tao anatin’ny hetsika. Misokatra hatrany amin’ny adihevitra kosa ny antoko ary tsy maka fahavalo amin’ireo namana rehetra. Maro ny fandaharam-potoanan’ny antoko, anisan’izany ny filankevi-paritra any Mahajanga ny sabotsy 3 desambra izao.